Umenzi weHydraulic Drayivu, uMvelisi, umenzi-mveliso - ukunciphisa izinto, iintshulube ezinciphileyo, iibhokisi zeentshulube, iibhokisi zeeplanethi, izinciphisi zesantya, iiyunithi, iihelical gear, iigeri zentsimbi, izixhobo zebhokisi yezolimo, izixhobo zeetrektara, iigi zelori, iibhokisi zebhokisi
Nokuba imveliso yakho iyahamba, iyajika, yenza, ibumba, iphakamisa, iyagrumba okanye ihambisa, ungathembela kwimveliso ye-hzpt hydraulic ukubonelela ngokusebenza okufunekayo ukuze uhlale ukhuphiswano. I-hzpt izinikele ngokungagungqiyo kubunkokeli bayo kwizicelo ezihambayo nezemizi-mveliso, isenza i-hzpt ibe ngomnye wabathengisi abakhethwayo beenkqubo zamanzi, iinxalenye, ulawulo kunye nezisombululo zobunjineli kwihlabathi liphela.
Iimpompo ze-hzpt, iinjini, ukuhanjiswa, iivelufa, iisilinda, abalawuli, iihoses kunye nezixhobo zibonelela ngokudityaniswa kwetekhnoloji ethembekileyo kunye noyilo olunobuchule, olunokuguqulelwa ngokuthe ngqo kwintsebenzo ethembekileyo kunye nexesha elingaphezulu. Nokuba ufuna icandelo elinye, isisombululo esenziwe ngokwesiko, okanye naliphi na icandelo eliphakathi, i-hzpt liqabane lokukhetha kwizicelo zeselfowuni kunye nezamashishini ezifuna kuphela ukusebenza ngokufanelekileyo.
UKUQHUBA KWI-HYDRAULICS WINCHES HGJ2.54-100-46-17.5-ZPL
UKUQHUBA KWI-HYDRAULICS WINCHES HGJ45-150-20-24-ZP
UKUQHUBA KWI-HYDRAULICS WINCHES HNYJ2.53-30-150-12-ZP
UKUQHUBA KWI-HYDRAULICS-WINCHES HLYJ6-160-135-26-ZP
UKUQHUBA KWI-HYDRAULICS WINCHES IDJ23-10-30-14
UKUQHUBA KWI-HYDRAULICS WINCHES HYJ2.5B-50-55-12-ZP
UKUQHUBA KWI-HYDRAULICS WINCHES HYJ3-21-300-18-ZP
UKUQHUBA KWI-HYDRAULICS WINCHES HYJ3A-27.5-49-16-ZP
UKUQHUBA KWI-HYDRAULICS WINCHES HYJ3-40-49-18-ZP
UKUQHUBA KWI-HYDRAULICS WINCHES HYJ6-140-135-26-ZPL
UKUQHUBA KWI-HYDRAULICS WINCHES HYJ67-300-50-36-ZP
UKUQHUBA KWI-HYDRAULICS WINCHES IYJ2.54-100-90-17.5-ZP
A inkqubo drive hydraulic Kukuqhuba okanye Ukuhanjiswa Inkqubo esebenzisa uxinzelelo ulwelo ngamanzi ukuqhuba oomatshini hydraulic. Igama elithi hydrostatic libhekisa kugqithiso lwamandla ukusuka kuxinzelelo kunye noxinzelelo, hayi ukusuka amandla e-kinetic yokuhamba.
Inkqubo yokuqhuba ngesanti kubunzulu baphantsi inamalungu amathathu: Umvelisi (umz Impompo hydraulic), ziqhutywa yi umbane, ukutsha injini okanye a ngomoya; Iivalvu, amacebo okucoca ulwelo, imibhobho njl njl (ukukhokela nokulawula inkqubo); imoto (umz motor hydraulic or isilinda hydraulic) ukuqhuba oomatshini.
Umgaqo hydraulic drivehlela
Umthetho kaPascal sisiseko seenkqubo zokuqhuba ngesanti kubunzulu baphantsi. Njengoko uxinzelelo kwinkqubo lunye, amandla alunikwa lulwelo ngokujikelezileyo alingana noxinzelelo x ndawo. Ngale ndlela, ipiston encinci ivakalelwa ngamandla amancinci kwaye ipiston enkulu iyaziva inamandla amakhulu.
Umgaqo ofanayo usebenza kwimpompo ye-hydraulic enomthamo omncinci wokutshayela ocela encinci torque, idityaniswe ne-hydraulic motor enomthamo omkhulu wokutshayela onika itorque enkulu. Ngale ndlela, unikezelo olunomlinganiso othile lunokwakhiwa.
Uninzi lweenkqubo zokuqhuba ngesanti kubunzulu baphantsi zisebenzisa iisilinda ezibubuninzi baphantsi komhlaba. Apha kusetyenziswa umgaqo ofanayo - i-torque encinci inokudluliselwa kumandla amakhulu.
Ngokurhwaphiliza ulwelo phakathi kwenxalenye yomvelisi kunye nenxalenye yemoto, okanye ngokusebenzisa iimpompo ze-hydraulic kunye / okanye iinjini ezinomthamo wokutshayela oguqukayo, umlinganiselo wosasazo unokutshintshwa ngokulula. Kwimeko apho ukujija kusetyenzisiwe, ukusebenza konikezelo kunqunyelwe. Kwimeko apho kusetyenziswe iimpompo kunye neemotor ezinokuhlengahlengiswa, ukusebenza ngokukuko, kukhulu kakhulu. Ngapha koko, ukuya kuthi ga malunga no-1980, inkqubo yokuqhuba ngesanti kubunzulu baphantsi yayingenalo nokhuphiswano kwezinye iinkqubo zokuqhuba.
Kule mihla, iisistim zokuqhuba zombane zisebenzisa i-servo-motors zombane zinokulawulwa ngendlela egqwesileyo kwaye zinokukhuphisana ngokulula ngokujikeleza kweesystem drive drive. Isilinda seHydraulic, phofu, ngaphandle kokhuphiswano lwamandla emgceni. Kwezi silinda, iinkqubo ze-hydraulic ziya kuhlala zinomdla kwaye ukuba le nkqubo iyafumaneka, kulula kwaye kusengqiqweni ukusebenzisa le nkqubo ukuqhuba okujikelezayo kweenkqubo zokupholisa, nazo.
Iisilinda ze-Hydraulic (ekwabizwa ngokuba zii-linear hydraulic motors) ngoomatshini izixhobo ezisetyenziselwa ukunika amandla omgama ngokuhamba komgca. Iisilinda zeHydraulic ziyakwazi ukunika ukutyhala kunye nokutsala imikhosi yezigidi zeetoni zemetrikhi ngenkqubo elula yokubamba amanzi. Iisilinda hydraulic ezilula kakhulu zisetyenziswa koomatshini bokushicilela; Apha, itankana linomthamo kwisiqwenga sesinyithi esityhalelwe kuso kwaye sitywinwa ngesigqubuthelo. Ngokumpompa i-hydraulic fluid kwivolumu, i-plunger inyanzelwa ngaphandle ngoxinzelelo lwendawo yompompo.
Izilinda ezintsonkothileyo zinomzimba onesigqubuthelo sokugqibela, a intonga yepiston, Kunye intloko isilinda. Kwelinye icala ezantsi, umzekelo, uqhagamshelwe kwenye isilumko, kanti kwelinye icala, intonga yepiston ikwabonwa kwangaphambili ine-clevis enye. Igobolondo lesilinda ngesiqhelo linodibaniso lwe-hydraulic kumacala omabini; Oko kukuthi, uqhagamshelo kwicala elingezantsi kunye nonxibelelwano kwicala lesilinda. Ukuba ioyile ityhalelwe phantsi kwepiston, intonga yepiston ityhilwe ngaphandle kwaye ioyile ebiphakathi kwepiston kunye nentloko yesilinda ityhalelwa emva kwitanki leoyile.
Umzobo wesekethe wenqununu iluphu evulekileyo kwaye loop evaliweyo inkqubo.
Isithuthi esihamba ngesanti kubunzulu baphantsi ngumlingani ojikelezayo we isilinda hydraulic. Ngokwenyani, isithuthi esihamba ngesanti kubunzulu baphantsi kufuneka sitshintshisane ne- Impompo hydraulic, ngenxa yenyani eyenza umsebenzi ochaseneyo. Nangona kunjalo, uninzi lwempompo ye-hydraulic ayinakusetyenziswa njenge-hydraulic motors kuba ayinakubuyiselwa umva. Kwakhona, isithuthi esihamba ngesanti kubunzulu baphantsi sihlala senzelwe uxinzelelo lokusebenza kumacala omabini emoto. Omnye umahluko kukuba imoto inokubuyiselwa umva ngevalufa yokuguqula.
Uxinzelelo kwinkqubo ye-hydraulic ifana nevolthi kwinkqubo yombane kunye nenqanaba lokuhamba kwamanzi ulingana ngoku. Ubungakanani kunye nesantya sempompo simisela inqanaba lokuhamba, umthwalo kwimoto umisela uxinzelelo.